बाजुराबाट गायक बन्न काठमाडौं आइपुगे ध्रुब बिक, हेर्नुहोस् उनको पहिलो अन्तर्वार्ता [भिडियोसहित] - pnpkhabar.com
You are at:Home»अन्तर्वार्ता»बाजुराबाट गायक बन्न काठमाडौं आइपुगे ध्रुब बिक, हेर्नुहोस् उनको पहिलो अन्तर्वार्ता [भिडियोसहित]
बाजुराबाट गायक बन्न काठमाडौं आइपुगे ध्रुब बिक, हेर्नुहोस् उनको पहिलो अन्तर्वार्ता [भिडियोसहित]
By पूजा बानियाँ on १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०७:३८ अन्तर्वार्ता, भिडियो
पिएनपिखबर, भक्तपुर। नेपालको प्रदेश नं. ७ को अति विकट ठाउँ बाजुरामा टिनको झानोले छाएको एउटा सानो झुप्रो देख्दा मन नै कुटुक्क हुन्छ। अझ भनौ त्यो सानो झुप्रोमा लुकेको एक परिवारको कथाव्यथा सुन्दा झन् कसको मन नरोला र। ७ जनाको सदस्य बस्ने त्यो घरमा एक बाल प्रतिभा पनि बिलाएका छन्। उनको प्रतिभा त्यहिँ गुम्सिएको छ।
११ वर्षको उमेरमा आफु अध्ययन गर्ने विद्यालयमा एक कार्यक्रममा गाउँदै गरेको भिडीयो भाइरल भएपछि ध्रुब बि.क नाम गरेका भाईको निकै खोजि भैरहेको छ अचेल। उनको प्रतिभाको कदर गर्दै र उनको प्रतिभा सबै माझ प्रस्तुत गराउन पिएनपिखबरको टिम ध्रुब भाईको घरमा पुग्यो।
ध्रुब बिक भगवानले दिएको अमुल्य आवाजलाई विश्वसामु पुर्याउन सामर्थ्य राख्ने सहयोगी मनहरुको अभावमा विकट गाउँको खोलानाला, चट्टान अनि सुस्केराहरुमा मात्र आवाज परिचित गराउन सिमित रहेको अवस्थामा पिएनपिखबर डट कमको टिम प्रदेश नम्बर ७ को अति विकट जिल्ला बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा पुगेर उनको प्रतिभालाई विश्वसामु चिनाउन एउटा सानो प्रयास गरेको छ।
हुन त नेपाल प्रतिभाको खानी नै हो। तर कति प्रतिभा यसै बिलाएका छन् , हराएका छन्। अदभुत कलाका धनी ध्रुब भाईको कला हराउन नदिन पिएनपिखबरले ध्रुब बिकलाई काठमाडौँ ल्याएको हो।
ध्रुब बिकको मन्त्रमुग्ध पार्ने स्वर सुनेर जोकोही पनि अचम्ममा पर्नुहुन्छ। उनको स्वर हस्ती मानिएका कुनै बाल कलाकारको भन्दा कम्तिको छैन । ओझेलमा परेका हरेक प्रतिभाले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो।
कक्षा ७ मा एक सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत ध्रुब बिक सुर, ताल र लयमा गाउँछन्। सानै उमेर देखि नै उनी गीत गाउन रुचि राख्दथे। कहिँ कतै कार्यक्रम हुदा उनी सहभागिता जनाउथे र पुरस्कार पनि जित्थे। सामाजिक संजालबाट अन्जान रहेका ध्रुब अरुले गाएको सुनेकै भरमा मिठो गाउँछन्।
बाजुरा जिल्लामा जन्मिएका स्वरका धनी धुर्ब्र बि.क पारिवारिक स्थिति समेत अत्यन्त नाजुक छ । ममी बाबा दुई जना दिदि र दुइ जना दाई गरेर उनको घरमा ७ जनाको सदस्य छन्। गौमुल गाउपालिक वडा न. ६ मा ध्रुब बिकको सानै भए पनि चिटिक्क परेको घर थियो। प्राकृतिक प्रकोपलाई अहिले सम्म कसले नै रोक्न सकेको छ र। एक्कासी ठुलो पानी परेर आएको बढीले बगायो ध्रुब बिकको सानो घर। बढीले घर बगाए पछि उनको स-परिवार सदरमुकाम मार्तडी बजारमा जस्ताको घर तिनले छाएर बसेका छन्।
ध्रुब बिकका बुबा इन्डियामा कहिले होटलमा भाडा माझ्ने कहिले गाडी सफा गर्ने त कहिले चौकीदारीको काम गर्छन्। आफुले कमाएको पैसा घरमा घर खर्चको लागि पठाईदिन्छन्। तर उनले दुख गरेर पठाएको तलब घर धान्न पर्याप्त हुदैन। नत्र त आफ्नो सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाएर गुणस्तरीय शिक्षादिक्षा दिने, राम्रो लुगा लगाउन दिने, मिठो खुवाउने कुन आमा बाबुको पो रहर नहोला र। आर्थिक स्थिति कम्जोर भएकै कारण ध्रुब बिकको गायक बन्ने रहर पनि अलपत्र परेको हो।
तर पिएनपिखबरको सहयोग र सहकार्यमा ध्रुब बिक अहिले काठमाडौँमा गायक बन्ने सपना पुरा गर्न आइपुगेका छन्। उनले आफ्नो पहिलो अन्तर्वार्तामा भने, ‘म गायक बन्न चाहन्छु। घरको आर्थिक अवस्थाका कारण मैले अवसर पाएको थिइन। पिएनपिखबरको टिमले मलाई यो अवसर प्रदान गरेको छ। मैले मेरो प्रतिभा यहाँहरु माझ प्रस्तुत गर्ने माध्यम पाएको छु। म निकै खुसि छु। ‘
हेर्नुहोस् ध्रुब बिकसँग गरिएको कुराकानी :